Ruushka oo Dalkiisa ka bilaabay Talaalka Covid19 – Ikhlas Media Agency
Talaalka ruushku dalkiisa ka bilaabay oo lagu magacabo Spuntnik V ayaa la soo saaray Bishii August 2020 waxaana so saaray dalka ruushka oo hada bilaabay in dadka dalkiisa laga talaalo Xanuunka covi19.
Talaalkan oo hada laga qaadanayo Magaalada Moscow ee Dalka Ruushka ayaa la sheegay in weli ay ku socoto tijaabo iyo balaarin iminkana la siinayao kumanan qof isu diwan geliyay inay qaataan talaalkan.
Dadka u baahan gudaha ruushka talaalkan oo aad u farabadan ayaa hadana dowlada dalkaas waxay wadaa dadaal ay ku doneyso in la kordhiyo tirade wax soo saarinta Talaalka Covid 19 oo dunida si weyn u gilglay sannadkan dhamanaya ee 2020.
Shirkadda Ruushka ah ee Talaalkan soo saartay ayaa la filayaa in ilaa dhamaadka sannadkan ay soo saarto ku dhawaad 2 milyan oo irbadood oo talalka corona virus ah.
Duqa magaalada Moscow, Sergei Sobyanin, oo qorshaha talaalkan shaaciyay ayaa sheegay in hada ay dowladu qorsheysay in la siiyo dadka ka shaqeeya iskuullada, daryeelka caafimaadka iyo adeegga bulshada ee magaaladaas oo dadka ku nooli yihiin 13 milyan oo qof.
Guud ahaan ruushku waxaa uu gudaha dalkiisa talaalka gaarsiin doonaan dad aad u badan laakiin waa marki shirkadu soo saarto talaal badan oo ku filan dadka guud ahan waxaana sidoo kale talaalkan si loo qaato loo sameyn doonaa dadka doonaya bog online ah oo ay iska so diiwaan geliyaan.
bahda Caafimaadka iyo khubaradda Talaalkan ayaa diiday in talaalka la siiyo dadka qaba cudurrada aan laga bogsan qaarkood iyo haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya.
Coronavirus ayaa dunida oo dhan si weyn u gilgilay ka dib markii maalayiin qof oo dunida ku nool uu si degdeg ah ugu dhacay halka qaar badan oo ah dad da’a ahna uu ku dilay dunida, dadka reer galbeedka ayaa wada sidii ay u heli lahaayeen dawo rasmi ah oo looga hortago xanuunka ruushak iyo UK ayaa hada bilaabay talaal kala duwan oo ay bixinayaan lamana saadaalin karo natiijada talaaladaas.
Boos Shaqo Banaan: Administration Officer, FT NOB Garowe (132041)